एसइइ उत्तिर्ण भएको खुसीयाली मनाउन नपाउँदै दुर्घटनामा छात्रको मृत्युु
मनोज यादव असाड ११, २०७५
मलंगवा । पुर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको हरिवनमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।हरिवन नगरपालिका वडा नं. १० स्थित सुखेपोखरीमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा हरिवन नपां. ११ घर भएका १६ वर्षिय रोनिस कार्कीको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएको रोनिसको उपचारको क्रममा हेटौंडा स्थित चुरेहिल अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृतक रोनिस शनिबार प्रकाशित भएको क्भ्भ् परिक्षामा हरिवनमा रहेको सनराइज इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलबाट ब्ं नचबमभ प्राप्त गरि उतिर्ण भएको बताइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले दिएको जानकारी अनुसार आइतबार बिहान सोही नगरपालिका वडा नं. ११ का साथि आदर्श महतो सँग ना ३० प ७६१३ नम्बरको मोटरसाइकलमा चढेर हरिवनबाट पश्चिम तर्फ जाँदै गर्दा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भइ सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको ना २१ प ५९५९ नम्बरको मोटरसाइकलमा ठोक्किएर विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको तरकारी बोकेको ना ४ च १५३० नम्बरको पिकअप गाडीमा ठोक्किएको थियो ।सो दुर्घटनामा मृतक रोनिसका साथी १६ वर्षिय आदर्श र अर्का मोटरसाइकल चालक हरिवन नपा १० निवासी ५१ वर्षिय प्रेमबहादुर कटुवाल घाइते भएका छन् ।घाइते महतोको काठमाडौ स्थित ग्राण्डी अस्पताल र कटुवालको छाउनी अस्पताल काठमाडौमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटना पश्चात् पिकअप गाडीका चालक फरार भएको छ भने पिकअपलाई हरिवन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसंधान गरिरहेको छ ।